Caafimaadka - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
Kooxdayada caafimaadka waxay diirada saareysaa hagaajinta helitaanka daryeel caafimaad oo tayo leh dhammaan. Intaad kujirto Community Health Service Inc. (CHSI), adiga iyo qoyskaaguba waxaad heli doontaan qaab shaqsiyeed oo dhan oo ay weheliso daryeel bukaan-ku-saleysan, jawi saaxiibtinimo qoys. Bixiyahaaga ayaa waqti qaadan doona si uu u fahmo yoolalkaaga daryeel caafimaad ee shaqsiyadeed wuxuuna kula shaqeyn doonaa sidii aad u abuuri laheyd qorshe shaqsiyeed oo loogu talagalay caafimaadkaaga
Waxaan haynaa bixiyeyaal badan, kalkaaliyayaal caafimaad iyo shaqaale taageero oo ku hadla Isbaanish. Waxaa laguu qori doonaa turjubaan Isbaanish ah markaad soo gasho. Waxaan sidoo kale la jaan qaadi doonnaa dhammaan luqadaha kale dalab, toos, fool-ka-fool kulan fiidiyoow ah.
CHSI waxay aqbashaa Medicaid, Medicare iyo inta badan qorshooyinka caymiska. Intaas waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale u qalmi kartaa miisaankayaga bixinta lacag bixinta, oo ay weheliso qiimaha daroogada ee la dhimay, oo sidoo kale loo yaqaan 340B qiimeynta daawada.
Isla maalin iyo ballamo socod ayaa laga heli karaa. Waxaan jeclaan laheyn inaan jadwalka kugu helno, fadlan maanta wac rugtaada caafimaadka ee xaafaddaada!
Daryeel Deg-deg ah
Baadhitaanada Kansarka Afka Ilmogaleenka iyo Mindhicirka
Baaritaanka Cunugga iyo Dhallinta
Maareynta Cudurrada Dabiiciga ah
Maareynta ka hortagga uurka
Xannaanada Uurka Leh
Baaritaanka Cudurada Galmada
Waafiican Baadhitaanada Ilmaha